I-AutoDesk, i-ESRI kunye nokuphindaphindeka kwiCalGIS 2009-Geofumadas
Ikhaya/ArcGIS-ESRI/AutoDesk, ESRI kunye ne-Manifold kwi-CalGIS 2009
Yinto Akumangalisi ukubona AutoDesk kunye ESRI kwinkomfa yonyaka ka-Geographic Information Systems e California, ngenxa yokuba igolide abanikeli (okt greenbacks 5,000 evakalala ngonyaka), kodwa wothuka ukubona ukuba sele kukhona izinto eziphindaphindiweyo kwakhona ukubonisa ye-22 Aprili ye-2008 ngaphambi kwengqungquthela.
ESRI izakubonisa iingcebiso kunye nezixhobo zokwandisa imveliso usebenzisa iArcGIS 9.2. Izihloko eziza kugutyungelwa zezi:
Iingcebiso zokusebenza ngeefayile ze-Excel kunye ne-ArcMap
Ukusebenza nedatha yeCAD
Ukulawula ukulungiswa kweemephu, izitha kunye nezinye "ezibonakala zifihlekile"
Iimpawu zokugcina ixesha kwi-cartography kunye nokusetyenziswa kweempawu
Iingcebiso zokuthumela nokushicilela kwi-ArcMap
Iipenari yemibuzo neempendulo
Abasebenzisi be-ESRI baya kuthi: Wow!
ezo zivela kwi-AutoDesk: iimmm ezibalabala ezimnandi zeemmm
ezo zintlobo: whta ixabiso !!! ????
AutoDesk izakubonisa ngelizwi likaJeremiah McKnelly izisombululo ezibonelelwa yi-AutoCAD kwindawo ye-GIS. Umxholo ugxile kugxininiso lwe-AutoDesk ekufumaneni umhlaba kwicandelo le-GIS, ukuzama ukuba abasebenzisi baphendule umbuzo esibuze ngawo i-ESRI. mazacuateados: Kutheni kubalulekile ukuba isebenze idatha yeCAD ngokwahlukileyo, ize idlulisele kwi-GIS, kwaye uyibuyisele kwi-CAD?
Ngoku ukuba AutoDesk seyiphambili kancinane (hayi ezininzi zokuthetha) ukunika izakhono ku AutoCAD ekulawuleni ukuququzelela iinkqubo, análisi weendawo, ezamahala data lwendawo Oracle, Kumncedisi we SQL kunye ArcSDE, iminyaka inkwenkwe 25 onobuganga umngeni ukuba Uvavanyo ukuba ukuchaneka kwezicelo zakho kunokubetha i-aesthetics ye-ArcGIS ngaphandle kokufa kwimemori.
Inkqubo ye-GIS iyagijima, amaqhinga kunye neenveli ze2009 ezinikezwa ngabasasazo base-AutoDesk baseCalifornia
Abathengi basekhaya abaphumeze izixazululo ze-geospatial kwi-AutoDesk babelana ngezibonelelo kunye neentloko.
Isingeniso kwi-AutoDesk kunye nesicwangciso sawo sokuxhasa iSiseko soVimba seGenesis Geospatial Foundation
Abo bavela kwi-AutoDesk baya kuthi: Mkhulu!
ezo ze-ESRI: mmm, unomdla, unokuyilungisa?
ezo ziMpawu: lixesha lini?
Kwaye ukuqala ukubangela ukungaboni, asibonise uyangena kulo mboniso ngezwi kunye neendlela zikaRobin M. Wood.
Kodwa asibonise efuna ukuba weva, kwaye umngeni abantu ukuba uthwale laptop yakho, baya kuba zintambo ezikhoyo, umsebenzisi ngamnye uya kufumana iphepha-mvume lethutyana eziphindaphindiweyo 8 ukuba purebe ubomi kunye ngqo.
Isikhundla siphelele kwaye umxholo ngu:
Umboniso jikelele weMpawu, ukujonga ngokukhawuleza ngaphakathi kwebhokisi le-245 ye-$
Isikhokelo kumsebenzisi womsebenzisi
Ukudibanisa ulwazi kunye nolwazi olubalulekileyo (kubonakala kulabo abafuna ukucela umngeni, kuba baya kuthumela ubungqina kunye nabasebenzi be-geodatabase)
Ukusingatha ithala neemibuzo
Ukupapasha imephu kwiinkonzo ze-IMS
ah ... baya kunika iincwadi ezipheleleyo eziquka iividiyo zokufundisa.
Abo beMatyala baya kuthi: ohhhhh !!!!
abo bavela kwi-AutoDesk: mmm, ngubani onobuninzi?
ezo ze-ESRI: ndixolele, ngaba uthe i $ 245 ???
Ngenye indlela, oku kuphela nesiboniso preconference, ngoko ukuba ube kufuphi California, okanye uhambe apho ... kuya kuba kuhle ukuba isiganeko 13 kwiminyaka elandelelanayo lubonise eyona ntsingiselo onelungelo kubuchwepheshe GIS ... mhlawumbi ngelinye ilanga siza kubona into ehamba phambili yeendlela ezingenanto 🙁
I-AutoDesk eneenjongo ezilungileyo zokufikelela kwi-Hispanics
I-AutoDesk izokubonisa okulungileyo kwiRasterDesign